ISaturn Square Uranus kaJuni 14: Uya kuchaphazeleka njani? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
ISaturn Square Uranus kaJuni 14: Uya kuchaphazeleka njani?
Ukuyilwa kwesikwere phakathi kweeplanethi ezimbini ezicothayo; I-Saturn kunye ne-Uranus ngokuqinisekileyo iya kubeka uxinzelelo oluninzi, imiceli mngeni kunye noxinzelelo kubomi bethu.
NgoMvulo kaJuni 14, 2021, kanye ngoFebruwari 17, isikwere esenziwe ngeSaturn eAquarius naseUranus eTaurus siyakubuya senziwe kwakhona. Umba weplanethi phakathi kweeplanethi ezimbini ezicothayo ziya kwenzeka amatyeli amathathu ngo-2021; phakathi ku-Februwari, phakathi kuJuni nasekupheleni kukaDisemba kwaye apha, iiplanethi ezimbini ziya kuba kumgangatho ofanayo we-zodiac ngemiqondiso emibini eyahlukeneyo eyenza ukuba ibe sisiganeko esingenakuphikiswa. USusan Taylor utyhila indlela eliza kuchaphazeleka ngayo iqela ngalinye lezinto kwiSaturn isikwere u-Uranus, ke ngaphandle kokuqhubeka, masifumanise uhlalutyo lwakhe apha.
Yintoni esinokuyilindela kwesi sikwere?
Amaqela ezinto eziza kuchaphazeleka njani kwisikwere seSaturn Uranus
isayinela ukuba umntu oyintombi uwele kuwe
Yintoni esinokuyilindela kuqwalaselo phakathi kweSaturn kwiAquarius kunye neUranus eTaurus?
Nge-14 kaJuni, iSaturn iya kuba kwi-13 ° ukusuka kumqondiso we-Aquarius kunye ne-Uranus kwi-13 ° ukusuka eTaurus, kunye, ziya kuba nganye kwi-90 ° enye kwenye kwiZodiac, zenze into eyaziwa njengesikwere. Isikwere sidume kakubi ngeenkwenkwezi, enyanisweni ngumbandela ombi, kwaye kwangaxeshanye umba onyanzela izinto ukuba zenzeke, oko kuthetha ukuba ngaphandle koxinzelelo olukhoyo, kodwa ekugqibeleni inokuba yinto elungileyo.
Phantsi kwempembelelo yayo; Esiza kuqala ukuziva sinamandla ngakumbi kwiveki enye ngaphambi kokuya kwiveki enye emva koko, sinokulindela ukuba uxinzelelo lwethu lweemvakalelo lube kwinqanaba eliphezulu. Xa ifundwa ngokusondeleyo, le nkalo ibonisa ukuba sinjalo ukujolisa iinjongo kodwa ungalwamkeli utshintsho oluzisiweyo ukuze sifezekise iinjongo zethu. Malunga ne-14 kaJuni, uyakuphinda uhlaselwe yiminqweno ephikisanayo phakathi kwesidingo senkqubela phambili kunye noloyiko lokuyeka imikhwa ethile egxothiweyo.
Inkqubo ye- Uxinzelelo kulindeleke ukuba siziva kusenokwenzeka ukuba zibekwe phantsi koloyiko lwethu, umzekelo, ukungazithembi thina kunye nezigqibo zethu, okanye nokuba noloyiko lokungena kwindawo ebonakalayo. Eyethu Ubomi bothando buya kusibona busifaka ngokungathandabuzekiyo kwaye ukwahlukana kuya kuba kunokwenzeka ngakumbi kunangaphambili. Nangona kunjalo, ezi ngxaki zinokuba ziziphumo zezizathu zangaphandle ezinje ngomnqweno wethu ophambukayo wokuhamba, ukuhamba nokuya ethekweni.
Nokuba sithini na esi sifo, siza kuba siphantsi koxinzelelo, sinokuziva ngathi siyabanjwa kwaye sigxekwa. Nangona kunjalo kuya kufuneka sivume ukuba ngequbuliso siyekelele kwaye sineenkani kwabanye.
Ingcebiso kaSusan Taylor yokusinda kulungelelwaniso lweplanethi
Ukuba ufuna ukudlula kule Saturn e-Aquarius nase-Uranus kwisikwere iTaurus, kufuneka hlala ubhetyebhetye, unyamezele kwaye ube nomonde kuwe nakwabanye. Kuya kufuneka simamele iminqweno yethu kwaye ngenxa yoko ukukhathazeka kwethu ukuze sithathe isitokhwe kwaye sifumane iindlela ezifanelekileyo zokufezekisa iinjongo zethu okanye ukuqhubela phambili kunye ngexesha elifanelekileyo ...
> Qiniseka ukuba bala umqondiso wakho okhulayo Apha<
Amaqela ezodiac ezinto anokuchaphazeleka njani nguSaturn isikwere u-Uranus?
Iimpawu zomlilo (iiAries, uLeo, iSagittarius)
Njengoko unamabhongo kwaye unamandla, usenokuziva unengxaki engaphezulu kunokuxhathisa. Ukuba izinto azihambi ngendlela yakho, thatha eli njengexesha lokubonakalisa nokutshintsha. Unyanzelekile ukuba uyeke ukungxama kwaye uphinde uchaze iinjongo zakho ngokuchanekileyo, emva kwayo yonke loo nto, izinto ezintle ziza kwabo balindayo!
Iimpawu zomhlaba (iTaurus, Virgo, Capricorn)
Ngokubanzi uzisa ngakumbi kunabanye kwaye uya kuthi ulive eli candelo njengoxinzelelo ngaphakathi kwakho. Ukunciphisa uloyiko kukuthintela ekuqhubekeni, ekutshintsheni ingqondo yakho njengoko uphupha ngokwenza. Ngenxa yoko, uyazibeka ityala, kodwa yiza, unganikezeli, sukudakumba! Zama ukuzithemba kuwe nakubomi bakho obukhethayo!
Iimpawu zomoya (iGemini, iLibra, iAquarius)
Eyona ngozi iphambili kuwe apha kukuba uya hamba uye macala onke uze utshise. Unamava ngeli candelo ngendlela ephazamisayo kwaye isenokugungqisa izinto kancinci kakhulu. Unokunyanzelwa ukuba wenze utshintsho olungakufanelanga kuba izithintelo ziya kuma endleleni yakho. Uya kudinga ukuqhubela phambili inyathelo ngenyathelo kwaye ulungelelanise izicwangciso zakho ukuba kukho imfuneko.
Iimpawu zamanzi (Umhlaza, iScorpio, iPisces)
IJupiter ikukhusela kwaye igcina umoya wakho uphela ngoJuni, ngaphandle kwendlela ISaturn-Uranus isikwere sikubonisa ngemida enzima. Ungathanda ukutshintsha ubomi bakho bemihla ngemihla, uthathe isigqibo sokutshintsha ubuchwephesha, imvakalelo okanye obunye ubomi, kodwa awukwazi. Kodwa, uqinisekile ukuba awukwazi? Ngaba le miqobo ayinakoyiswa? Sebenzisa eli xesha ukulungiselela izicwangciso zakho zexesha elizayo!
Jonga la manqaku nawo:
Yintoni ukubuyisela kwakhona kwaye kusichaphazela njani?
Yintoni ephembelela kwaye ibonisa iplanethi nganye?
Xa i-Mercury i-retrograde nini?
Agasti ka-Agasti: Sebenzisa amaThuba!
phupha amazinyo ewa
yintoni ekubuyiseleni ngokutsha ngoku
intsingiselo yokomoya yama-99
xa ubona i-333
ukuphuma kwelanga uphawu lwenyanga